आलिया रणबीरको ब्रेकअप ! – " सुलभ खबर "
आलिया रणबीरको ब्रेकअप !
काठमाडौं । विवाहको चर्चामा रहेका भारतीय अभिनेता रणबीर कपूर र आलिया भट्टको सम्बन्धमा केही दरार देखिएको छ । केहि समयदेखि दुवैबीच सम्बन्ध राम्रो नरहेको बताइएको छ ।
हालै दुबै करीना कपूरको भाई अरमान जैनको रिसेप्शन पार्टीमा पुग्दा एकअर्कालाई तरस्कार गर्दै गरेको देखिए। त्यस समयमा रणबीरकी आमा नीतू सिंह वातावरणलाई सामान्य बनाएकी थिइन् । बलिउडका सबैभन्दा चर्चामा रहेका जोडी मध्येका एक आलिया र रणबीर, एक अर्कालाई हेर्न समेत मन गरिरहेका छैनन्।
स्रोतका अनुसार आलिया भट्ट र रणबीर कपूर एकै स्टुडियोमा शुटिङ गरिरहेका थिए तर दुवैले एक अर्कासँग कुरा समेत गरेनन। समाचारका अनुसार आलिया र रणबीरले ‘ब्रह्मास्त्र’ फिल्मको शुटिङ पूर्ण गरिसकेका छन् र अर्को फिल्मको तयारीमा छन्। दुबै मुम्बईमा एकै स्टुडियोमा शुटिङ गर्दै छन् तर एक अर्कालाई भेट्दैनन्।
आलिया आफ्नो फिल्म ‘गंगुबाई काठियावाडी’को शुटिंग गर्दैछिन् भने रणबीर कपूर ‘शम्शेरा’ फिल्मको शुटिंगमा व्यस्त छन्। यद्यपि दुवै जना कामको बिचमा प्रेम ल्याउन चाहँदैनन्, त्यसैले उनीहरू त्यसो गर्दैछन् पनि भनिएको छ । यसअघि आलिया भट्ट र रणबीर कपूरको २०१९ को डिसेम्बरमा बिहे हुन सक्ने समाचारहरु आएका थिए । तर विवाह भएन । पुन मेमा विवाह गर्न सक्ने बताइएको थियो । तर अब दुबै दुरी बढ्न थालेको छ । जसलाई लिएर प्रशंसकहरु निराश हुन सक्छन् ।
काठमाण्डाै – चार वर्षअघि सुन्दर भविष्यको खोजीमा सदरमुकाम बेनी आएकी सपना रोका सही निर्णय लिन
धार्मिक आस्था राख्ने मानिसहरु व्रत बस्छन् । विभिन्न किसिमका व्रत मध्ये ‘बुध प्रदोष’ व्रत पनि
यी चार बार लगाउँदै नलगाउनुस् नयाँ लुगा
काठमाडौँ । कपडाले व्यक्तित्वको परिचय दिन्छ। कपडा मिलाएर लगाएको खण्डमा मानिसलाई आकर्षक पनि देखिन्छ। तर
काठमाण्डाै – एक १६ वर्षीया किशोरी भिडियो सेयरिङ एप टिकटकमा १० करोड फलोअर्स पाउने पहिलो
जागिरमा तनाव भोगिरहनु भएको छ ? यस्ता छन् कम गर्ने ६ धार्मिक उपाय
घर परीवार चलाउन मानिसलाई धनको आवश्यकता पर्दछ । र त्यो धन आर्जन गर्न मानिसहरु व्यापार–व्यवसाय
काठमाडौं – विपिन कार्की, निश्चल बस्नेत र नम्रता श्रेष्ठको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्म ‘प्रसाद’ युट्युब
महिला र पुरुष एकै रथको दुई पाङ्ग्रा हुन् कुनै एक बिना अर्कोको संसार चल्दैन
म सँग बिहे गर्नलाई केटा चाहियो !(तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला)
कोरोनाले थप २८ जनाको मृत्यु
जाडो महिनामा दम र निमोनियाका बिरामीहरु बच्ने उपाय यस प्रकारका छन्
रुखकटहर मनपर्छ, यस्ता छन् फाइदा